चिनियाँ वैज्ञानिकले कोरोनाभाइरस ल्याबमा बनाएको हो भनेपछि हंगामा, अब के गर्छ चीन ? — Imandarmedia.com
चिनियाँ वैज्ञानिकले कोरोनाभाइरस ल्याबमा बनाएको हो भनेपछि हंगामा, अब के गर्छ चीन ?
एजेन्सी। चिनियाँ वैज्ञानिकले कोरोनाभाइरस ल्याबमा बनाएको हो भनेपछि हंगामा, अब के गर्छ चीन ? भिडियो सामाचारको अन्त्यमा छ हेर्न नछुटाउनु होला। यी महिला भाइरोलोजिस्ट चीन सरकारले आफूलाई ज्यान मार्ने ध’म्की दिएको र आफू चीनमा असुरक्षित भएको भन्दै चीनबाट भागेर अमेरिकामा शरण लिएर बसेकी छिन् ।
लि मेंगले कोरोनाभाइरस चीनको वुहान शहरको मासु बजारबाट नआएको दावी गरिन् । उनले वुहानको मासु बजार एक स्मोक स्क्रिन भएको र कोरोनाभाइरस प्रकृतिको देन नभएको दावी गरिन् । जब लि मेंगसँग यो भाइरस वुहानको मासु बजारबाट नआएको भए यसको उत्पत्ति कसरी भयो भनेर सोध्दा लि मेंगले जवाफमा भनिन् ‘यो खतरनाक भाइरस वुहानको प्रयोगशालाबाट आएको हो र यो मानव निर्मित हो । उनको पूरा अन्तरवार्ता तल हेर्नुहोस्